Homeụgbọ okporo ígwèNjide okporo ụzọ maka bọs ọha
Njide okporo ụzọ maka bọs ọha
31 / 07 / 2014 ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ
Njide okporo ụzọ nke bọs ọha: Ndị ọrụ Ụlọ Ọrụ Alaka nke Istanbul na-ahụ n'okpuru Top nke dị n'elu Topkapi, bọs ndị ọha na eze na obere akpa eji etinye n'ọrụ. Dị ka ndị njem na bọs na minibus, ndị nlekọta okporo ụzọ kwụsịtụrụ na njedebe nke ngwa mgbe ha hụrụ mmebi nke ndị ọkwọ ụgbọala na ụzọ.
A na-enye ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na enweghị mkparịta ụka na ekwentị mkpanaaka, ihe na-acha uhie uhie na ọkụ tube. Onye na-akwọ ụgbọ ala ọha na eze, onye na-enweghị ọkụ na-enweghị ọkụ ma jupụtakwa ndị njem ahụ, kwukwara 80 TL.
Istanbul Traffic Supervision nke ìgwè ndị ọrụ na-elekere 17.30'da n'okpuru akwa nke bọs ọha na minibuses n'okpuru akara nke Topkapi. Isi nke Alaka Istanbul na-ahụ maka ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Mesut Gezer na okporo ụzọ ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Tülay Işık nọkwa, ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii na-etinyekwa bọs na bọmbụ n'ihu.
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii, ndị ọkwọ ụgbọala dị ka oku ekwentị, mmebi iwu uhie, ụzọ ụkwụ, dịka mmebi iwu na-ede ihe, mgbe ha ruru n'ókè nke ngwa iji gosipụta njirimara ha kwụsịrị ndị ọkwọ ụgbọala.
80 TL N'AKUGHỊ ỤBỌCHỊ
Na ngwa, ndị uwe ojii rịọrọ ajụjụ dị ka ọkụ tube, ikike na ikike. Enweghị ike ọkụ na ụgbọ okporo ígwè n'etiti Esenler na Eminönü. Ndị otu ahụ mesiri ezigbo onye ọkwọ ụgbọala 80 TL mma.
N'aka nke ọzọ, ndị ọrụ obodo nọ n'ụgbọala ahụ na-enye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ mma.
Ụlọ Ọha Ọha nke Onwe na IGO
Esgbọ ala ndị nkịtị nke na-ezughị oke na Kocaeli…
Obere ụmụ obere na ndị na-arụ ọrụ yiri nke Bursaray halk
Ọpụpụ Ọhụrụ Na-enyefe na Ụlọ Ndị Ọha nke Onwe
Ụlọ ọrụ nke oge a maka Ogwe Ọha na Van
MOTAŞ mere ikuku ikuku oyi na bọs ọha na eze
Iwu oyi na Ụlọ EGO
Ụlọ EGO na Metro Ọ dịghị Ramp na njedebe nke 2018
Rozọ ndị ọzọ na-ebughari na bọs Ọhaneze na Kadikoy
Ndị njem na-ahụ maka ndị njem na-eleba ụgbọ ala ụgbọ mmiri A.Ş
Istanbul Steeti Inspection Department
ụgbọ ala ọha
Nyocha na New Line